Nandritra ny famotorana no nahafantarana fa avy any Vangaindrano ity tovolahy ity, ary miaramila efa nodimandry ny rainy ka ny fanamian’ity farany no entiny mandeha misotrosotro. Voalazany fa rehefa mivoka alina mankeny Analakely izy no manao io fanamiana io. Fantatra ihany koa fa efa hatramin’ny faha 25 taonany izy no nifoka rongony. Lehilahy 31 taona izy io, monina eny Ankorondrano. Natolotra ny polisy ao Analakely ny alarobia 21aogositra teo noho io fisandohana sy nanao fanamiana miaramila io.
Avy nanao fisafoana tany Isotry sy ny manodidina ireo miaramila ny alarobia teo tokony ho tamin’ny 9 ora sasany alina ka nandalo teo Analakely, nahita tovolahy iray nanao fanamiana miaramila tanteraka. Nahatsikaritra kosa anefa izy ireo fa tsy mandeha araka ny laoniny ny fipetrak’ireo grady teny aminy sy ny endrik’ilay akanjo miaraka amin’izato lobaka. Noho izany dia nanatona azy ireo miaramila ireo . Nitonona ho miaramila moa ity tovolahy ity raha nanao « présentation » ary nilaza fa «sergent chef» no gradiny. Rehefa nohamarinin’izy ireo anefa dia fantatra fa mpisandoka io tovolahy io fa tsy miaramila. Natolotra ny Fampanoavana izy omaly alakamisy 22 aogositra.